Madaxweynaha dowladda Puntland oo Garoowe ku soo noqday kadib safar shaqo ee dalka Itoobiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowladda Puntland oo Garoowe ku soo noqday kadib safar shaqo ee dalka Itoobiya
December 1, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali oo warbaahinta kula hadlaya aqalka madaxtooyada manta. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa manta oo Jimce ah dib ugu soo noqday caasimada Puntland ee Garoowe kadib dhowr maalmood oo uu safar shaqo ku joogay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Madaxweynaha ayaa garoonka waxaa ku soo dhaweeyay masuuliyiin katirsan golayaasha dowladda iyo dad shacab ah.
Cabdiweli oo warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay in uu Itoobiya kula soo kulmay masuuliyiinta sare ee dalkaas ayna ka wadahadleen arrimo ay kamid ahayeen fududaynta isu socodka shacabka labada dhinac, ganacsiga iyo adkaynta ammaanka xuduuddaha Puntland iyo Itoobiya, waxaana uu hoosta ka xariiqay Madaxweynuhu in dhammaan arrimaha laga wadahadlay ay guul kusoo dhammaadeen.
November 20, 2017 Madaxweynaha Puntland oo si diiran loogu soo dhaweeyay Addis Ababa
November 22, 2017 Puntland iyo Itoobiya oo isku raacay adkaynta xiriirka ka dhaxeeya
Mareykanka oo beeniyay in dad shacab ah lagu dilay howlgalkii Bariire ee bishii Agoosto